Spotlight & Most popular Burma/Myanmar Related News (Dec 2011) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » Spotlight & Most popular Burma/Myanmar Related News (Dec 2011)
Spotlight & Most popular Burma/Myanmar Related News (Dec 2011)
Posted by kai on Dec 3, 2011 in Myanma News, Myanmar Gazette | 40 comments
BURMA RELATED NEWS – DECEMBER 02, 2011
Reuters – Myanmar’s Suu Kyi praises U.S. engagement
AP – Reports: Myanmar’s Shan rebels sign cease-fire
AP – Myanmar Gov’t Officials Meet With Kachin Rebels
AFP – Reclusive Myanmar takesastep out of the shadows
AFP – What’s inaname? In Myanmar (Burma),alot
CNN – Clinton to continue visit with Myanmar’s Nobel Peace laureate
CNN – Clinton sees signs of opening in Myanmar
CNN – China, Myanmar reaffirm ties amid U.S. diplomatic move
Korea JoongAng Daily – Clinton pushes Myanmar to sever ties to North
Washington Post – Clinton, Aung San Suu Kyi vow to promote Myanmar democracy, reforms
Washington Post – Hillary Clinton in Burma: kisses for Suu Kyi, handshake for the president
Channel NewsAsia – Clinton offers US$1.2m to Myanmar civil society
Time Magazine – Clinton in Burma: As Ties with U.S. Strengthen, Will the Country’s Ethnic Minorities Be Forgotten?
Telegraph.co.uk – Hillary Clinton Burma visit raises hopes political prisoners will be released
The Borneo Post – China calls for end to Myanmar sanctions
New Straits Times – Myanmar farmers see no relief
msnbc.com (blog) – Myanmar’s new capital:avast, empty city
CBS News – Refugees from Burma now call Kentucky home
Xinhua – Myanmar, Belarus sign accords on bilateral cooperation
Xinhua – Myanmar women in cross-border marriages receive free AIDS treatment in SW China city
The Irrawaddy – ‘They Are Fighting Us LikeaForeign Invasion’
Mizzima News – Ethnic leaders brief Clinton on conflicts
Mizzima News – U.S. welcomes Burma’s decision to cut military ties with North Korea
Mizzima News – Peaceful assembly and march bill waits for president’s signature
DVB News – World Bank, IMF to enter Burma: US
DVB News – Aid push to stem Kachin refugee crisis
By Andrew Quinn | Reuters – 28 mins ago
Kai has written 976 post in this Website..
Naypyidaw, Myanmar (CNN) — Secretary of State Hillary Clinton personally deliveredaletter from President Barack Obama to Myanmar’s President Thein Sein Thursday. Here is the letter in full as released by the State Department:
I appreciate your government’s help in planning and preparing for this milestone visit. I look forward to hearing the tangible outcomes of Secretary Clinton’s discussions, which we all hope will put us onapath toanew phase in our bilateral relationship.
You might beaone-term president. Some folks who voted for you the last time may think twice in 2012.
I look forward to hearing the tangible outcomes …………
လက်ဆုပ်လက်ကိုင်ပြနိုင်သောရလာဒ်များ ဆိုတော့ “အပြောတွေ” ကို ကြောက်တယ်ပေါ့။ ဟဲဟဲ
BURMA RELATED NEWS – DECEMBER 03-05, 2011
Reuters – Map study finds vivax malaria has firm grip in Asia
Reuters – Myanmar’s Suu Kyi eyes constituency near Yangon
AFP – Myanmar state media confirms pact with rebel group
AFP – Myanmar president ‘signs protest bill’
AFP – Vatican envoy to meet Suu Kyi in Myanmar this week: report
AFP – Clinton downplays talk of Myanmar war crime probe
IANS – India to host ministers of Mekong-Ganga countries
IANS – Myanmarese delegation interested in trade with Bengal
BusinessWeek – Myanmar Seeks ‘Win-Win-Win’ in Balancing U.S.-China Competition
BusinessWeek- Uralkali Trade Venture to Increase Myanmar Potash Sales in 2012
BusinessWeek – Clinton in Myanmar May Augur Opening After Apple, Pepsi Exit
BBC – Connecting with Aung San Suu Kyi
The Daily Beast – Hillary Clinton Visits Burma in Midst of Burmese Spring
Asia Times Online – Clinton tests the Myanmar mystery
UPI – Truce offered to Burmese ethnic minorities
New York Times – Myanmar’s Courts Subvert Rule of Law, Activists Say
IRIN – MYANMAR-THAILAND: Slow pace of registering migrants
CNN – Least corrupt place? New Zealand. Worst? Somalia, North Korea
California Watch – Language limits jobs, health care for new Burmese refugees
Otago Daily Times – Bangladesh PM visits Myanmar, plans to boost trade
The Times of India – Paresh Baruah’s deputy arrested in Myanmar
Asian Correspondent – Does Burma’s peace contract with Shan rebels mean the start of change?
Bernama – Abductors made RM 500,000 ransom demand before being shot dead
Bernama – Thai-Myanmar Checkpoint To Be Reopened Monday
China Daily – More women kidnapped for brides
Xinhua – 1 killed,6injured in three explosions in Myanmar states: official
Daily Star Online – Myanmar’s Mann in the house meets Clinton
Daily Star Online – BusinessBusinessmen seek formal channels of trade with Myanmar
Daily Star Online – Dhaka keen to import gas, electricity
IBNLive.com – MPs of first Parl of Myanmar coming to study Indian model
Monsters and Critics.com – Freed Myanmar comedian to hit the road
The Irrawaddy – Rapporteur on Rights and Reforms
The Irrawaddy – Tay Za’s Son Wins EU Sanctions Appeal
DVB News – Key Myawaddy border crossing reopens
BURMA RELATED NEWS – DECEMBER 07, 2011
Time Magazine – Why Are Burmese Scientists Studying Missile Technology in Moscow?
Global Security Newswire – Russia Training Myanmar Officers in Nuclear Science, Missile Design
UPI – Rebels clash with Myanmar army
Channel NewsAsia – Myanmar rebel talks raise guarded peace hopes
New York Times – Villagers Become Refugees in Myanmar as Rebels Clash With Troops
Asia News Network – Bangladesh seeks trade channels with Burma
International Business Times – Insight: Clinton Visit Opens Burma Road to Investors
AsiaNews.it – Cathedral celebrations with Card Martino and Aung San Suu Kyi, Yangon archbishop says
Sin Chew Jit Poh – Opinion: The Myanmar Spring
The Huffington Post – Burma: Engagement or Appeasement?
The Star – Myanmar worker found with skull smashed
GlobalPost – Will politics sully Aung San Suu Kyi?
New Kerala – Over 1,000 Myanmar officials trained in South Korea
New Kerala – Aid appeal to combat HIV/AIDS in Myanmar
Xinhua – Myanmar plans strategic fight against HIV/AIDS in next5years
The Nation – Thai firm plans JV for Burma wind-power projects
Daily Star Online – PM’s visit to Myanmar: New opportunities unfolding
Christian Science Monitor – Fear of China pushes Burma (Myanmar) out of isolation
Daily News & Analysis –2Indian journalists detained in Myanmar to be deported after questioning
Newstrack India – Stilwell Road on India-Myanmar border to getamakeover
Korea Times – US officials due in Seoul to discuss NK, Myanmar
The Japan Times – A milestone for Myanmar
Japan Today – U.S. envoy on Myanmar to visit Japan, China, S Korea
VOA News – While Burma’s Chinese Businesses Thrive, Competition Worries Locals
Bernama – Asean Broadband Corridor To Be Announced Thursday
The Irrawaddy – NLD ‘Guardian’ U Lwin Dies Aged 88
The Irrawaddy – ‘Concrete Action’ Needed on Rights in Burma: US Lawmaker
The Irrawaddy – Shwe Mann Denies Nuclear Program
Mizzima News – Burmese Election Commission warns parties led by two brothers
Mizzima News – 10-party Burmese coalition meets with ruling USDP
DVB News – Business magazines go censor-free
DVB News – Thailand to fly in Burmese workers
5.12.2011 မှစတင်ဖွင့်လှစ် သင်ကြားပေးမည့် နည်းပညာတက္ကသိုလ် (မြိတ်)တွင် ပညာင်ကြားခွင့်ရသော နှစ်သစ်/ဟောင်း ကျောင်းသား/သူများသည် ကျောင်းအပ်နှံရေးအတွက် ငွေးကြေးဆိုင်ရာ ပြသနာတစ်ရပ် ပေါ်ပေါက်နေသည်။
2.12.2011 မှ စတင်ကာကျောင်းအပ်လက်ခံလျှာက်ရှိရာ ကျောင်းအပ်ဖောင်များကို ကျောင်းပုံနှိပ်စာအုပ် ၀ယ်ယူပြီးမှသာ တစ်စောင်ကို 1000ကျပ်နှုန်းဖြင့် ရောင်းချနိုင်မည်ဟု ပြောကြားကာ ပုံနှိပ်များကို တစ်ခါတည်းေ၇ာင်းချခဲ့သည်။စာအုပ်ဝယ်မှသာလျှင် ကျောင်းအပ်လက်ခံမည်ဟု ဆိုသောကြောင့် ကြိုတင်ှနှင့်ပြီးသော နှစ်ကျကျောင်းသားများ၊ တောင်းယူထားသော ကျောင်းသား/သူများ၊ပြင်ပဖြေများအတွက် လွန်စွာအဓိပ္ပါယ်မဲ့လှပါသည်။ချို့တဲ့သူများအတွက် အခက်အခဲဖြစ်ပြီး စာအုပ်မ၀ယ်နိုင်သူများ ကျောင်းအပ်လက်မခံနိုင်သည့်သဘောဖြစ်သည်။
ထိုသို့သော ကိစ္စရပ်များကို အထက်မှ ၀န်ကြီးများက ချမှတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုသည် ။၀န်ကြီးကရော တကယ်ပဲ ချမှတ်ထားသည်လား။ရှိနှင့်ပြီးသောကျောင်းသားကျောင်းသူ သစ်/ဟောင်းများ အတွက်ပုံနှိပ်ေ၇ာင်းချခြင်းကို ပြန်လည် စဉ်းစားသင့်ပါသည်။
ကျောင်းလခများကို တစ်လစီအတွက် ငွေပေးသွင်းရန်အတွက် မခက်ခဲသ်ာလည်း တစ်နှစ်ပတ်လုံးအတွက် ကြိုတင်ပေးသွင်းရန် သတ်မှတ်ခဲ့သဖြင့် ငွေပမာဏသည် ချို့တဲ့သောကျောင်းသားမိဘများအတွက် ခက်ခဲလှပသည်။သို့ကြောင့်ကျောင်းလခများကို တစ်ဝက်စီ ခွဲကာ ပေးသွင်းရန် သတ်မှတ်ပေးစေချင်ပါသည်။
ထုိ့ပြင် ကျောင်းကြို/ပို အတွက် ပြင်ပ မှန်လုံများက တစ်နေ့လျှင်(700) ကျပ်နှုန်းဖြင့်ပြေးဆွဲလျှက်ရှိပါသည်။ ထိုကားဖြင့်မတက်နိုင်သော ကျောင်းသား/သူများအတွက် ကျောင်မှ ပြေးဆွဲပေးသော ကျောင်းကားများမှာ တစ်ရက်လျင် (500) ကျပ်နှုန်းဖြစ်သော်လည်း စရံငွေမှာသုံးလစာ (30000) ပေးသွင်းရသောကြောင့် ယနေ့အထိကျောင်းမအပ်နှံနိုင်သောကြောင် ကျောင်းမတက်နိုင်သေးသော ကျောင်းသားများ အမှန်ပင်ရှိနေပါသည် ။ထို့ကြောင့် ကျောင်းကားစရံငွေအား ယခင်မူလက အတိုင်းပင်ရှိစေချင်ပါသည်။
အချုပ်အားဖြင့် ပုံနှိပ်စာအုပ်စရိတ်၊ ကျောင်းအပ်စရိတ်၊ ကျောငးကားစရိတ် အစရှိသော စရိတ်စရိတ်များသည် ချို့တဲ့သော ကျောင်းသားမိဘများအတွက် လွန်စွာမှ အခက်တွေ့ရကာ ကျောင်းပင်မအပ်နိုင်သေးသည့် ရင်နင့်စရာ အဖြစ်များနှင့် ကြုံနေရပါသည်။ချမ်းသာသော လူနည်းစု ကျောင်းသာ/သူများ ကျောင်းသားမိဘများကိုဖယ်ကာ ချို့တဲ့သော ကျောင်းသား/သူများ သနားစရာ ကျောင်းသားမိဘအများစုကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားစေချင်ပါသည်။ အမှန်ကန် ဆုံးနှင့်အဖြစ်သင့်ဆုံးဘက်မှ ကရုဏာထားကာ ၀ိုင်းဝန်းဖြေရှင်းပေးကြဖို့မေတ္တာရပ်ခံလျှက် …..
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်က အောက်ပါ သမိုင်းဝင် အဆောက်အအုံဟောင်း (၂)ခုအား ပြတိုက်အသွင်ဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် တင်ဒါခေါ်ယူသည့်ကြော်ငြာစာအား ၇-၁၂-၂၀၁၁နေ့ထုတ် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်..။
(က) ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်းရှိ ၀န်ကြီးများရုံး အဆောက်အအုံများ။
(ခ) High Court ဗဟိုတရားရုံး အဆောက်အအုံ။
တင်ဒါအဆိုပြုလွှာများကို ၃၁-၁-၂၀၁၂ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားပေးပို့ရန် ကြေငြာထားပါတယ်..။
ဦးဟန်ညောင်ဝေရဲ့ ပြည်တော်ပြန်ခရီးစဉ်နဲ့သူ့ရဲ့အမြင်များကို http://www.burma.irrawaddy.org မှာဖတ်ရှုနိုင်သလို ရရုားမှာ နျူကလီယားပညာရပ်ကိုသင်ကြားနေတဲ့ မြန်မာအရာရှိပေါင်း ရာနှင့်ချီ၍ရှိကြောင်းကိုလည်းဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်…
၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် တပ်မတော်အစိုးရလက်ထက် ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့ မဲအပြတ်အသက်အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့သော်လည်း အာဏာလွှဲပြောင်းပေးခြင်းမခံရတဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ကို ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က နိုင်ငံရေးပါတီတည်ထောင်ခွင့်ပြုကြောင်း (၁၂-၁၂-၂၀၁၁)နေ့စွဲနဲ့ ထုတ်ပြန်ကြေငြာလိုက်ပါတယ်..။
(ကိုးကား၊ ၁၃-၁၂-၂၀၁၁ နေ့ထုတ် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာ)
Renegotiating the Myitsone agreement to placate domestic and foreign critics might be on the agenda; but the hydropower project overall makes too much economic and political sense for the impoverished country of Myanmar to cancel it lightly.
After all, the one ally that the government and army can rely on in their attempts to pacify Kachin is certainly not the Myanmar democratic movement; international NGOs; the United States; nor the other politicians and pundits who have exulted in the halt of Myitsone – it is China.
(Sound familiar? Hint: Clinton, the separatist lama, etc., etc.)
In mid-September, the Myanmar Minister of Electric Power impatiently defended the dam and deal structure in an interview that made the regime no friends among critics of the project but probably serves asauseful indicator of the government’s view of the necessity and practicality of the project:
”Are the UN to investigate this? This is not the UN’s concern in anyway – this is only our country’s concern. Since we have already researched about this dam on environmental and technological aspects, we will not back down now in fact we are to go ahead. I’m saying this to make things clear with this hysteria – that we will go ahead.” …
”We are running these projects [with China] because our country has no money. If we have money, we would do it ourselves.” 
Q: Some reports pointed out that the project will only bring economic benefits for China. What’s your comment on that? A: This viewpoint is extremely wrong. People who hold suchawrong viewpoint either don’t understand the situation or have ulterior motives. Regarding infrastructure, it is an international practice to implement BOT mode. According to our BOT agreement, upon completion of the upstream-Ayeyawady hydropower project, CPI will be responsible for operation for 50 years, after 50 years the project will be transferred to the Myanmar government free of charge.
Either in terms of direct economic benefit or indirect profit, the upstream-Ayeyawady hydropower project will significantly boost the fast development of economy and society in Myanmar. In terms of direct economic benefit, when the several hydropower stations in upstream-Ayeyawady basin, including Myitsone Hydropower Station, are completed, Myanmar government will gain economic benefits of USD54 billion via taxation, free electricity and share dividends, far more than CPI’s return on investment during our operation period. In particular, as the design life of the project is over 100 years, when we transfer it after 50-year operation, the Myanmar government will haveafixed assets increase worth tens of billions US dollars, in addition to hundreds of billions US dollars of direct economic benefits. 
ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီးဋ္ဌာနနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့် ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး အမှုဆောင်များ၊ ရုပ်ရှင်နှင့်
ဗီဒီယိုဆင်ဆာ အဖွဲ့ဝင်များ၊ ရုပ်ရှင်လောကသားများ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး၍ မူလဆင်ဆာ သတ်မှတ်ချက် (၁၀)ချက်မှ (၆)ချက်သို့
၃။ တိုင်းရင်းသားချစ် ကြည်ရေး၊
၄။ အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှု ထိန်းသိမ်းရေး၊
၅။ ကိုယ်ကျင့်တရား ကောင်းမွန်ရေး၊
၆။ ရာဇ၀တ်မှုပပျောက် ရေး၊
၇။ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုများပါ ၀င်မှုမရှိစေရေး၊
၈။ ကာမရာဂ လှုံ့ဆော်မှုများ ပါဝင်မှုမရှိစေရေး၊
၉။ ညစ်ညမ်းမှု ကင်းရှင်းရေး၊
၁၀။ ကလေးသူငယ်များ အရေးတို့ကို
၃(၃။ တိုင်းရင်းသား ချစ်ကြည်ရေး၊
၄(၄။ အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှု ထိန်းသိမ်းရေး၊
၅(၇။ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုများ ပါဝင်မှု မရှိစေရေး၊
ဟု ပြောင်းလဲလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ကျန်သေးတယ် “သမိုင်း” ရယ် “သရဲ” ရယ် “ရဲ” ရယ် နဲ့ပတ်သတ်ရင်
ကြိုတင် ခွင့်တောင်းတဲ့ ….
ဟဲဟဲ …ဒါလေးတွေတော့ ပြုတ်သွားဘာဘီ…
၁၀။ ကလေးသူငယ်များ အရေး …
ဆိုတော့ တိုးတက်ပြောင်းလဲမှု အနေဖြင့် သုံးသပ်ရလျင်..
အိမ်ထောင်ရေး ဖောက်ပြန်မှု များကို ကိုရီးယား စံချိန်မီ
ရိုက်ကူးခွင့် ရရှိသွားပြီး သဘာဝကျကျ ပြစ်ပြစ်နှစ်နှစ်
ဆဲဆို နိုင်သွားပြီ ဖြစ်ပါကြောင်း….
ရွှေည၀ါ ဆရာတော်အား ကျောင်းတိုက်မှနှင်ထုတ်သည့်စာကိုလက်ခံရရှိ…သတင်းအပြည့်အစုံကို http://www.moemaka.blogspot.com တွင်ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
APAP – 1 hr 58 mins ago
BEIJING (AP) — China’s ambassador to Myanmar has met Aung San Suu Kyi in the first reported meeting between one of the military regime’s biggest backers and the high-profile opposition leader.
Chinese Foreign Ministry spokesman Liu Weimin said Thursday that the meeting came at Suu Kyi’s request. He would not say when it took place.
“Madam Aung Sang Suu Kyi expressed her hope several times that she could meet with the Chinese ambassador to Myanmar, and the ambassador met with her in response to her request and listened to her opinions,” Liu toldadaily news conference.
Suu Kyi met earlier this month with U.S. Secretary of State Hillary Clinton, whose visit raised questions about Myanmar’s ties with China.
Liu repeated that Beijing is committed toacomprehensive partnership between China and Myanmar and backs resource-rich Myanmar’s efforts to boost its economic and social development.
Beijing has long provided key diplomatic and economic support for Myanmar, but relations have been strained by fighting between Myanmar’s army and rebel groups that has sent refugees into southwestern China.
China was caught off guard by the suspension of the $3.6 billion China-funded Myitsone dam being built byaChinese company in Myanmar. The suspension wasasignificant about-face in Myanmar’s domestic politics. The project had drawn protests from ethnic and environmental groups.
Liu said that Chinese State Councilor Dai Bingguo, Beijing’s top foreign policy official, would take part in regional meetings on the Mekong River early next week in Myanmar, and would also have bilateral meetings with Myanmar government officials.
Politicians have to hedge their bets and it’s only polite to meet when someone important requestsameeting several times. Of course, the ambassador wouldn’t have gone without some sort of approval from the generals.
The recent opening to the West is partly due to frustration with the KIA not subjugating themselves to the nominally civilian gov’t by joining the so-called Border Guard Force. The bottom line is Kachins don’t trust Bamars. And China, with its official non-interference policy, cannot force them to join. Besides, the border with China doesn’t needaguard force. After all, Kachins speak Yunnanese Mandarin and it’s difficult to distinguish between Kachin and Yunnanese.
In the long run, Burma will always be influenced by China. No if’s, but’s, maybe’s… just as Mexico is influenced by United States. So, dream on, my friends.
(In America, mind you, and not Myanmar!)
China confirms meeting with Myanmar opposition leader
chinadaily.com.cn 2011-12-15 23:04:03
BEIJING – China confirmed here on Thursday that its ambassador to Myanmar had met with Aung San Suu Kyi, the leader of the country’s opposition party.
“The Chinese ambassador met with [Aung San Suu Kyi] in response to her repeated requests to have contact with China, and [the ambassador] listened to her views,” Chinese Foreign Ministry Spokesman Liu Weimin toldadaily press conference.
Liu said China is always committed to developing the China-Myanmar strategic and cooperative partnership and supports the country’s efforts to promote economic and social development and national reconciliation.
“Based on the principle of mutual respect and non-interference in each other’s internal affairs, China will engage in communication with all sectors of Myanmar society that support the China-Myanmar friendship,” Liu said, calling on the two sides to jointly foster bilateral relations and better serve the interests of the two peoples.
Myanmar’s main opposition party, the National League for Democracy (NLD), led by Aung San Suu Kyi, was granted re-registration asalegal political party on December 13.
ကင်မ်ဂျုံအီလ် တော့ ကြွသွားရှာဘီ
ကွယ်လွန်ချိန်မှာ အသက် ၆၉ နှစ် ရှိပြီဖြစ်တဲ့မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင် ကင်ဂျုံအီးလ် ကွယ်လွန်သွားတယ်လို့ မြောက်ကိုရီးယား နိုင်ငံပိုင် ရုပ်သံက ဒီကနေ့ ထုတ်လွှင့်သွားပါတယ်။
“ချစ်စွာသောခေါင်းဆောင်ကြီးဟာ အလုပ်ဝန်ပိလို့စိတ်ရောကိုယ်ပါ ထိခိုက်ရပြီး နှလုံးရောဂါနဲ့ကွယ်လွန်ပါသတဲ့”
” ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း နဲ့ရုပ်ချင်းဆင်သူတစ်ယောက် တွေ့ ”
ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းနဲ့ ဆင်တဲ့ ယူ ၂၃ မြန်မာ့လက်ရွေးစင် ဘောလုံးသမား ကျော်ကျော်မျိုး ကို ပြည်တွင်း ဂျာနယ် တစ်ဆောင် ( Envoy News Journal ) မှ တွေ့ဆုံမေးမြန်းရာ….
” တစ်နိုင်ငံလုံးက လေးစားရတဲ့ ပုဂိုလ်တစ်ယောက် နေရာကနေ ၀င်ရောက်သရုပ်ဆောင်ခွင့်ရရင် အတိုင်းမသိ ၀မ်းသာမှာပါ…တဲ့…“
( Envoy News Journal )
လှည်းတန်းမီးပွိုင့်ရှိ အများသုံးသန့်စင်ခန်းဗုံးပေါက်ကွဲမှုတွင် အမျိုးသမီးတစ်ဦးသေဆုံး
by Myit Makha Mediagroup on 21 Dec, 2011
BURMA RELATED NEWS – DECEMBER 21, 2011
AFP – Yangon blast kills one: Myanmar official
AFP – Myanmar to take its refugees back from Bangladesh
AFP – Thai PM backs Suu Kyi in landmark Myanmar talks
AlertNet – Aid agencies need long-term access to Myanmar’s Kachins –HRW
Business Times – Thai firm wins bid for2Myanmar oil blocks
Bangkok Post – PTT gets drilling rights in Burma
Bangkok Post – PM throws support behind Suu Kyi
The Nation – Yingluck denies Thaksin smoothed the way in Burma
Asian Correspondent – Burma’s Shan State Army remains faithful to Pang-long Agreement
Asia Times Online – All roads lead to Myanmar
Forbes – Myanmar’s Sanctioned Tycoons Jostle For Position
Tuoitrenews – Vietnam, Myanmar agree to increase trade ties
Siliconindia.com – Myanmar Seeks Collaboration With Indian Business Houses
Council on Foreign Relations (blog) – North Korea and Kim Jong-il: The Myanmar Element
China Daily – China-Myanmar border economic zone being built
Radio Australia – Deadly bombing at Burmese university
The Irrawaddy – Suu Kyi Says Becoming an MP Will ‘Enhance Cooperation’
The Irrawaddy – Italian-Thai Employees Briefly Kidnapped
The Irrawaddy – Govt Agrees Ceasefire Talks With Karen Rebels
Mizzima News – ‘Ban this scene’ is true story, says director
Mizzima News – Gold and antimony in KNU areas attract investors
Mizzima News – KNU ‘satisfied’ with third cease-fire meeting
DVB News – Unlike Than Shwe, Kim Jong Il wasamaster of thought control
DVB News – More aid needed for Kachin refugees: HRW
”အခုဟာက နိုင်ငံခြားကနေ နိုင်ငံခြားငွေနဲ့ ပြည်တွင်းကိုလွှဲတဲ့ လစာငွေတွေအပေါ် ကောက်ခံတဲ့ဝင်ငွေခွန်ကို ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုလိုက်တယ်လို့ သိရတယ်။ ဒါကြောင့် နောက်ပိုင်းကျရင် ဟွန်တီပါပျောက်လာလိမ့်မယ်လို့ ယူဆရတယ်” ဟု လည်း စီးပွားရေးပညာရှင်တစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။
”ဒီလို အခွန်လျော့ချလိုက်တော့ နိုင်ငံတော်ဝင်ငွေလျော့သွားပေမယ့် နိုင်ငံခြားမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတွေအတွက် ကောင်းတယ်။ နိုင်ငံခြားနဲ့ တရားဝင်ငွေလွှဲတဲ့သူ များလာမယ်။ နိုင်ငံခြားငွေတွေလည်း တိုက်ရိုက် ၀င်လာနိုင်တယ်။ နိုင်ငံခြားကနေ ဘဏ်နဲ့ချိတ်ပြီး တိုက်ရိုက်ငွေလွှဲတာတွေ ရှိလာမယ်။ဒီအတွက် ဘဏ်လုပ်ငန်းတွေ ဖွံ့ဖြိုးလာမယ်။ အခုဆိုရင် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ မလေးရှားနိုင်ငံ၊ စင်ကာပူနိုင်ငံတွေမှာလည်း မြန်မနိုင်ငံက MFTB,MICB အစရှိတဲ့ ဘဏ်ခွဲတွေ ဖွင့်မယ်ဆိုတာလည်း ကြားသိရတယ်ဆိုတော့ ပိုအဆင်ပြေသွား နိုင်တယ်။ နောက်ပိုင်းဆိုရင် နိုင်ငံခြား ဘဏ်လုပ်ငန်းတွေလည်း ဖွင့်ပေးတော့မှာဆိုတော့ ငွေလွှဲတဲ့ကိစ္စတွေ အဆင်ပြေမှာပါ” ဟုလည်း စီးပွားရေးပညာရှင်တစ်ဦးက သုံးသပ်ပြောကြားခဲ့သည်။
အော် ..မီဒီယာ ပီသ တဲ့သဂျီး ….
သေချာတွားဘီ ဆိုရင် …နောက်တခါ ကျရင် ဒို့ဘဘ ကိုဘဲ ဒို့က
ကိုယ့်စားရိတ်နဲ့ကိုယ် မဲသွားထည့်တော့မယ် ဟီဟိ….
BURMA RELATED NEWS – DECEMBER 24-25, 2011
AFP – Japan foreign minister arrives in Myanmar
Reuters – Japan to ask Myanmar to join bilateral pact: Kyodo
ASIAONE – Japan foreign minister heads to Myanmar
Asia News Network – Myanmar refugees indulge in traditional fare during Christmas
Thanh Nien Daily – Vietnam, Myanmar sign $390 mil project agreement
CNN – Pope prays for Syria and Myanmar in Christmas message
The Japan Times – Light and dark shades from Burma and Japan
Scoop.co.nz – Ehrlich: Burma FreesaComedian to Travel to America
Thailandnews.net – Myanmar allows banks to handle remittances from abroad
Xinhua – Myanmar, KNU to cease fire next month: gov’t peace maker
Xinhua – Chinese Buddha sacred tooth relic tour concludes in Myanmar
Philippine Star – Myanmar to adopt SL Agritech hybrid tech
Thai News Agency MCOT – Thailand supports setting up of centres for Myanmar nationality verification
UPI – Myanmar gov’t.: More troops into Kachin
Khaleej Times – The Suu Kyi path
Daily Star Online – 18 Myanmar nationals arrested in St Martin’s
The Irrawaddy – Burma’s Zarganar Off to the US
The Irrawaddy – South Africa’s Dalai Lama Visa Denial In Court
Mizzima News – Supreme Court suspends two lawyer activists
Mizzima News – Political prisoners number 1,572: AAPP
သူကြီး ရှင့် – Seminar2မှာ Comment ပေး၍မရဖြစ်နေပါသည်။ :-)
တစ်ချို့ ပို့ စ်တွေမှာ.
အမှန်အကန်ရေးပြီး Submit Comment နှိပ်လိုက်ရင် လုဒ်ဒင်ပြပြီး ရေးထားတာတွေ…ဘတ်ကနဲ ပျောက်သွားပါတယ်..ခင်ည
ရေးပြီး မပေါ်လို့ ..ကော်ပီကူးပြီး နောက်တစ်ခါ Submit Comment ထပ်နှိပ်တော့ Duplicate comment
ဖြစ်နေပါတယ် ပြောတယ်ခင်ဗျ တစ်ကယ်တော့ ဘာမှမပေါ်ဘူးခင်ည
နောက်တစ်ခါ Submit Comment နှိပ်လဲ Duplicate comment ဖြစ်နေတယ်ပြောပြီးဘာမှ မပေါ်ပြန်ဘူးခင်ည
အွန်လိုင်းမှ ဖုန်းခေါ်နိုင်သည့် ကြိုတင်ငွေဖြည့်ကတ် ဇန်နဝါရီတွင် အသက်ဝင်မည်
အွန်လိုင်းမှ တရားဝင်ဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်သည့် VOIP စနစ်သုံး ကြိုတင်ငွေဖြည့်ကတ်များ လာမည့်နှစ်ဆန်းပိုင်းတွင် စတင်ဖြန့်ချိသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် ရတနာပုံတယ်လီပို့ကုမ္ပဏီမှ ပရောဂျက်မန်နေဂျာ ဦးအောင်စံမြတ်က ပြောသည်။ အဆိုပါ ဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်မည့် ငွေဖြည့်ကတ်များအား ယခင် ၂၀၁၁ နိုဝင်ဘာလတွင် စတင်ဖြန့်ချိမည်ဟု ထုတ်ပြန်ထားသော်လည်း ရေအောက်ဖိုက်ဘာဆက်ကြောင်း ချို့ယွင်းမှုကြောင့် အင်တာနက်မြန်နှုန်းများ ကျဆင်းနေ၍ ဝန်ဆောင်မှုအား ယာယီရပ်ဆိုင်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ “လာမယ့် ဇန်နဝါရီလအတွင်းမှာ စတင်ဝန်ဆောင်မှု ပေးမှာပါ။ ဝန်ဆောင်မှု မစခင် ကတ်တွေကို ကြိုတင်ဖြန့်ချိသွားမှာပါ။ ဖြန့်ချိတဲ့အခါမှာလည်း အင်တာနက်ဆိုင်တွေကို အဓိကဖြန့်ချိသွားမှာပါ” ဟု အထက်ပါပုဂ္ဂိုလ်က ပြောပြခဲ့သည်။ အဆိုပါ စနစ်မှာ လက်ရှိအသုံးပြုနေသော Pfingo, Skype စနစ်များကဲ့သို့ ဖုန်းအလွယ်တကူ ပြောဆိုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး တရားဝင် ငွေဖြည့်ကတ်စနစ်သုံးသည့် စနစ်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ ထုတ်လုပ်ထားသည့် VOIP စနစ်သုံး ငွေဖြည့်ကတ်အမျိုးအစားများမှာ FEC တန်ဖိုး ၅၊ ၁၀၊ ၃၀ နှင့် ၅၀ တန်ကတ်များ ဖြစ်ပြီး မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်ရန်အတွက် ဆောင်ရွက်ဆဲဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ ဖုန်းခေါ်နိုင်သည့် စနစ်ကို ရတနာပုံဝက်ဘ်ပေါ်တယ်ရှိ Y-talk စနစ်တွင် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ဖုန်းခေါ်ဆိုရာတွင်လည်း ပြည်တွင်းသာမက ပြည်ပနိုင်ငံများကိုပါ ခေါ်ဆိုနိုင်မည်ဖြစ်၍ နိုင်ငံတကာ VOIP စနစ်ကို အသုံးပြုထားသည့်အတွက် သာမန်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများထက် အသံပိုကြည်လင်မည်ဖြစ်ကြောင်း အထက်ပါပုဂ္ဂိုလ်က ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ကြောင်း ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့ထုတ် Popular News ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ “”
BURMA RELATED NEWS – DECEMBER 28, 2011
Channel NewsAsia – Indonesian foreign minister meets Suu Kyi in Myanmar
The Japan Times – Despite Korean tensions, Genba focused on changing Myanmar
Mainichi Daily News – FOCUS: Japan trying to keep up with rapidly changing Myanmar
Asian Correspondent – Why does Burma Army disobey the president’s order?
Bangkok Post – Burma projects could strengthen Thailand-China ties
The Nation – Thaksin had no role in Burma gas deal
E-Pao.net – Little benefits from the Indo Myanmar Border Trade
USA Today – Burma seems poised on cusp of growth
upstreamonline.com – Gunanusa wins Yadana contract
Jakarta Globe – Indonesia Supports Burma’s Democratization
Imphal Free Press – Moreh bandh lifted following assurance from Myanmar authorities to bear medical expenses of injured teen
The Irrawaddy – Thai-Burmese Relations: Mutual Necessity Trumps Historical Animosity
The Irrawaddy – President’s Ceasefire Order Fails to Stop Offensive
The Irrawaddy – Wa Army Gets Green-Light on Local Trade from Burmese Gov’t
Mizzima News – Philanthropist George Soros arrives in Burma
Mizzima News – Japan, Burma to talk about economic aid projects
Mizzima News – Burma discriminates against minority women: UN Watch
DVB News – Indonesia and Burma FMs discuss ASEAN chair
မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် ကူးတို့ဆိပ်ရပ်ကွက်တွင် ပေါက်ကွဲမှုနှင့်အတူ မီးလောင်ကျွမ်းမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ABC စက်ဆန်းရှိ ကုန်ပစ္စည်းသိုလှောင်ရုံ ဂိုထောင်များ ပေါက်ကွဲမီးလောင်မှုကြီးတစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါပေါက်ကွဲလောင်ကျွမ်းမှုကြီးကြောင့် ဘေးပတ်ဝန်းကျင်အားလုံးရှိ နေထိုင်သူများ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး သေဆုံးသူများလည်းရှိသည်။ ဖြစ်စဉ်အသေးစိတ်နှင့် မည်မျှထိခိုက်ဆုံးရှုံးသည်ကို အတိအကျ သိရှိရခြင်း မရှိသေးပါ။ (ယခုအထိ မီးလောင်ကျွမ်းနေဆဲဖြစ်သည်။ ၂၉- ၁၂ – ၂၀၁၁ နံနက် ၃ နာရီ ၄၀ မိနစ်အထိ )
မီးလောင်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး အရေးပေါ်ဌာနသို့ ယနေ့ နံနက် ၄ နာရီအထိ ရောက်ရှိလာသော လူနာစုစုပေါင်း ၅၈ ဦးရှိပြီဖြစ်ပြီး သေဆုံးသူ ၁၁ ဦးလည်း ရောက်ရှိလာကြောင်း ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး အရေးပေါ်ဌာနသို့ ရောက်ရှိနေသော 7Day News သတင်းထောက်မှ သတင်းပေးပို့သည်။ “ရောက်လာတဲ့လူနာတွေထဲက အများစုက ရွှံ့တွေဗွက်တွေ ပေနေတယ်။ သံဃာတော်တွေလည်း ပါတယ်။ သေဆုံးတဲ့သူ ၁၁ ဦးက ဆေးရုံကြီး အရေးပေါ်ဌာနကိုရောက်လာတဲ့ အရေအတွက်ပါ။ကျ န်တာတွေလည်း ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်” ဟု သတင်းပေးပို့သည် ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းများသို့ သွားရောက်လှူဒါန်းနိုင် မီးလောင်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ရပ်ကွက်အတွင်းမှ ဒုက္ခသည်များအား မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် အ.မ.က (၂၀)၊ (၂၄) နှင့် ဘုန်တော်ကြီးကျောင်း တစ်ကျောင်းတို့တွင် နေရာချထားပေးပြီး လှူဒါန်းလိုသူများ သွားရောက်လှူဒါန်းနိုင်ကြောင်းကို ရပ်ကွက်အတွင်း အသံချဲ့စက်များဖြင့် လိုက်လံအသိပေးကြေညာလျှက်ရှိသည်။။
အခုမှ သတင်းတက်လာတာမို့.. ၀မ်းနည်းမိပါကြောင်းပြောရင်းနဲ့.. အရင်သွားနှင့်သူကို နှုတ်ဆက်လိုက်ပါရဲ့..။
The Voice Weekly နှင့် Living Color Magazine တို့ထုတ်ဝေလျက် ရှိသော Living Color Media ၏ CEO၊ Myanmar Egress တည်ထောင်သူနှင့် အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဒေါက်တာ နေဝင်းမောင် (အောင်ထွဋ်) အသက် (၅၀) နှစ်သည် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့ နံနက် ၁ နာရီ ၁၀ မိနစ်တွင် ရန်ကုန် ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၌ ကွယ်လွန်သွားပါသဖြင့် ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့ (တနင်္ဂနွေနေ့) နေ့လည် ၂ နာရီတွင် ရေဝေးသုသာန်သို့ ပို့ဆောင် မီးသဂြိုဟ်မည် ဖြစ်ပါကြောင်း။
(ဆေးရုံမှကားများ နေ့လည် ၁၁ နာရီတွင် ထွက်ခွာပါမည်။)
နှစ်သစ်ထဲရောက်ပြီး မှ ဖြစ်မှဖြစ်ရလေတယ်ဗျာ။
မိသားစုနဲ့ ထပ်တူ မဟုတ်ပေမယ့်
နှမြော ၀မ်းနည်း ဖြစ်မိပါကြောင်း သူကြီးရေ။
ဒေါက်တာနေ၀င်းမောင်သည် မီဒီယာနယ်ပယ်သာမက Capacity Building Center ဖြစ်သည့် Myanmar Egress တည်ထောင်သူ တစ်ဦးလည်း ဖြစ်သည့်ပြင် မကြာသေးမီက တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များနှင့် အစိုးရဆွေးနွေးမှုများတွင်လည်း ကြားဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူ တဦးဖြစ်သည်။ ဒေါက်တာနေ၀င်းမောင် ကွယ်လွန်ခြင်း သွားခြင်းအတွက် MNN မှ ၀မ်းနည်းကြောင်း မှတ်တမ်းတင် အပ်ပါသည်။
Myanmar Egress တည်ထောင်သူ တဦးဖြစ်သူ ဒေါက်တာနေ၀င်းမောင် (ခေါ်) စာရေးဆရာ အောင်ထွဋ်ဟာ ဇန်န၀ါရီ ၁ ရက်နေ့ မနက် ၁နာရီ ၁၀မိနစ်မှာ နှလုံးရောဂါနဲ့ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးမှာ ရုတ်တရက်ကွယ်လွန်သွားပါတယ်။ သူဟာ Living Color မဂ္ဂဇင်း the Voice Weekly ဂျာနယ် တည်ထောင်ခဲ့သူတဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါက်တာနေ၀င်းမောင်ဟာ မီဒီယာလောကမှာသာမက လူအရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးရေးအတွက် ဖွဲ့စည်းခဲ့ထားတဲ့ Myanmar Egress ရဲ့ အဓိက ဦးဆောင်သူတဦးဖြစ်ပါတယ်။ မကြာခင်တုန်းက တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့ မြန်မာအစိုးရအကြား ကြားဝင်ညှိုနှိုင်းပေးခဲ့သူအဖြစ်နဲ့လည်း သိကြပါတယ်။ ဒေါက်တာနေ၀င်းမောင်ကွယ်လွန်တာဟာ အီးဂရက်စ်အဖွဲ့အတွက် ဆုံးရှုံးမှုတရပ်ဖြစ်တယ်လို့ အီးဂရက်စ်ကို ပူးတွဲထူထောင်သူ ဦးလှမောင်ရွှေက ဗွီအိုအေကို ပြောပါတယ်။
“ အီးဂရက်စ်အနေနဲ့ Capacity Development လုပ်နေတဲ့ လုပ်ငန်းတွေရှိတယ်၊ State Building, Nation Building လုပ်ငန်းတွေမှာ လုပ်နေတာရှိတယ်။ သူ့အခန်းကဏ္ဍက ထိုက်သင့်သလောက်ပါသလို ကျနော်တို့ မြန်မာအီးဂရက်စ်မှာ သူက အရေးပါတဲ့နေရာမှာရှိတယ်။ အခုလုပ်နေတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးမှာလည်း အီးဂရက်စ်မှာလည်း အတတ်နိုင်ဆုံးပါဝင်တယ်။ ဒီမှာလည်း သူ့အခန်းကဏ္ဍက ပါဝင်တော့ ဒေါက်တာနေ၀င်းမောင်အနေနဲ့ ဆက်မလုပ်နိုင်တဲ့အတွက် ဒီလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာ ကျနော်တို့အတွက် ဆုံးရှုံးမှုပါပဲ။”
ဗဟုဖွံဖြိုးရေးအဖွဲ့ အကြီးတန်းသုတေသီ ဦးတင်မောင်သန်းကလည်း အခုလို နိုင်ငံရေးအခြေအနေ အချိန်ကာလမှာ ဒေါက်တာနေ၀င်းမောင်ကွယ်လွန်တာဟာ တိုင်းပြည်အတွက် ဆုံးရှုံးမှုတရပ်ဖြစ်စေတယ်လို့ ယူဆပါတယ်။
“ဆုံးရှုံးမှုပေါ့ဗျာ။ မြန်မာပြည်မှာ အခုလို ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို စိတ်အားပြင်းပျတဲ့ လူတယောက် လက်တွေ့ကျတဲ့ လူတယောက် ဆုံးရှုံးမှုပေါ့ဗျာ။”
ဒေါက်တာနေ၀င်းမောင်ဟာ ထင်ထင်ပေါ်ပေါ်မနေပဲ နိုင်ငံပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ ကြိုးစား ပမ်းစာလုပ်လာခဲ့သူလို့ ဦးတင်မောင်သန်းက ပြောပါတယ်။ ဒေါက်တာနေ၀င်းမောင်ရဲ့ အောင်ထွဋ်အမည်နဲ့ နိုင်ငံရေးဆောင်းပါးရေးရာမှာ ဂယက်ရိုက်တွေရှိခဲ့ပြီး၊ သူ့အပေါ် နိုင်ငံရေးတတ်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေက ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဝေဖန်မှုတာတွေလည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း သူဟာ သူယုံကြည်ရာကိုပဲ ဆက်လုပ်ခဲ့သူလို့ ဦးလှမောင်ရွှေက သုံးသပ်ပါတယ်။ သူနဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် နောက်တဦးဖြစ်သူ ဒေါက်တာကျော်ရင်လှိုင်ကတော့ ဒေါက်တာနေ၀င်းမောင်ကွယ်လွန်ခဲ့တယ်ဆိုပေမယ့် သူ့မှာ အောင်မြင်မှုတွေ ကျန်ခဲ့တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
“ မြန်မာ့အီးဂရက်က အခု မြန်မာနိုင်ငံမှာ အရေးပါတဲ့ လူမှုအဖွဲ့အစည်းဖြစ်လာတယ်ဆိုတာ သူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုတခုပဲလေ။”
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် ဒီဇင်ဘာလဆန်းက အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကလင်တန်လာတုန်း မြန်မာပြည်က လူမှုအဖွဲ့အစည်းကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံရာမှာ ဒီအထဲ ဒေါက်တာနေ၀င်းမောင်လည်း ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒေါက်တာနေ၀င်းမောင်ကို အဖဖြစ်သူ ဒု ဗိုလ်မှုးကြီးသန်းမောင် (အငြိမ်းစား)နဲ့ မိခင် ဒေါ်ယဉ်ယဉ်တို့ကနေ ၁၉၆၂ ခုနှစ်မှာ ဖွားမြင်ခဲ့တာပါ။ ဒါကြောင့် ကွယ်လွန်ချိန်မှာ သူဟာ အသက် ၅၀ ရှိနေပါပြီ။ ၁၉၈၈ ခုနှစ် ဆေးတက္ကသိုလ် ၁ ရန်ကုန်ကနေ MBBS ဘွဲ့ရရှိပြီး၊ ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှာတော့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Yale တက္ကသိုလ် World Fellows Program မှာ တတ်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ကွယ်လွန်ချိန်မှာ သားသမီး လေးဦးကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။
အခုပဲ သတင်းက လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ကြေညာသွားပါတယ်။
သေဒဏ်သမား တသက်ကဲ့သို့ နှစ်နဲ့ ပြောင်းလဲသွားမယ်။
နှစ် ၃၀ အထက်အားလုံး နှစ် ၃၀ ပြောင်းလဲသွားမယ်။
၂၀ တွေကတော့ နှစ်ရဲ့ လေးပုံ ၁ပုံ ကျခံရမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့။
၀မ်းသာစရာ သတင်းဆိုပေမဲ့ နှစ်ကြီးသမားတွေ ၃၀ နဲ့ ရပ်နေတာတော့ စိတ်မကောင်းလှပါဘူး။ လွတ်မြောက်မဲ့သူတွေ အတွက် ၀မ်းသာ ပီတိ ဖြစ်မိပါတယ်။